Praise & worship - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Niavaka ny sabata niarahana tamin’ny antoko mpihira TRIA Ambohimanambola ny voalohan’ny volana Desambra 2012 lasa teo. Ho fanakatonana amin’ny fomba ofisialy ny fanamarihana ny faha 10 taona nijoroan’izy ireo dia nisy ny hetsika lehibe, izay nampitondraina ny anarana hoe “Praise and Worship”, nokarakarainy. Tanora maro avy eo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo no tonga nanatrika io fotoana io, ary maro ihany koa ireo vahiny tonga nanotrona azy ireo tamin’izany.
Koa satria sabata io andro io, dia fotoam-bavaka lehibe no niarahana tamin’ny fotoana tapany maraina. Ny loholona Benjamin RAZAFINDRAKOTOSOA, izay mpiandraikitra ny zana-pandaharana “Fahalalàna, Fahendrena, Voa tsara” ao amin’ny radio Fanambarana kosa no nitondra ny toriteny tamin’izany. Araky ny perikopa izay iraisan’ny fiangonana rehetra dia nalaina tao amin’ny Isaia 53: 6- 11, Matio 16: 13-20 ary Asan’ny Apostoly 4: 1-7 izay toriteny izay. Nisongadina tamin’izany fa ny tanora no nosafidian’Andriamanitra hanehoana ny heriny sy ny voninahiny, ka tokony hanaiky izany ny tanora tsirairay mba ahatonga ilay teny ao amin’ny Isaia 55: 10 ho tanteraka aminy.
Tamin’ny fotoana tapany hariva dia nisy ny seminera izay niarahana tamin’ny diakona Andry Laza RAMAMBASON (Zoky Andry), izay mpanabe tanora eo anivon’ny fiangonana ihany koa. Ny fankatoavana ray aman-dreny kosa no nisongadina tamin’izany. Ary nofaranana tamin’ny fiderana miavaka izay nohafanain’ny antoko mpihira TRIA Ambohimanambola izay rehetra izay. Nanatrika io fotoana io ramatoa Aurella Mailhol sy ny ankohonany, ary ireo mpiandraikitra avy eo anivon’ny rezionaly Antananarivo, ny rantsana Oliva nasionaly, ary ny VGFFM (vehivavy GFFM). Marihina ihany koa fa nisy ny hira izay natolotry ny antoko mpihira ho an’ny VGFFM tamin’io sabata io.